ဒီနှစ်နွေမှာယူနိက်တက်ကချိတ်ဆက်နေပေမယ့်မခေါ်ယူသင့်တဲ့ကစားသမား၃ဦး – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းကဒီနှစ်နွေမှာ လူသစ်ခေါ်ရေးစီမံချက်နဲ့ ကစားသမားအသစ်တွေကိုထပ်မံခေါ်ယူဖို့ချိတ်တက်ထားမှုတွေရှိနေပါတယ်။
ယူနိက်တက်မှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို ဖြည့်တင်းဖို့အနည်းဆုံးကစားသမား ၄ဦးကိုတော့ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီဲကစားသမားတွေထဲမှာလက်ရှိပရိတ်သတ်တွေတောင်းဆိုနေတဲ့ကစားသမားတွေလည်းပါဝင်နေပြီးအဲ့ဒီကစားသမားတွေထဲမှာမခေါ်ယူသင့်တဲ့ကစားသမား၄ဦးရှိနေကြောင်းမန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်းက သုံးသပ်ရေးသားထားပါတယ်.
သရဲနီတို့ရဲ့သူရဲကောင်းကြီး ရိုနယ်ဒိုကမခေါ်ယူသင့်ဘူးလို့မန်ချက်စတာညနေခင်းကပထမဆုံးဖော်ပြထားပါတယ်။ ရိုနယ်ဒိုဟာလက်ရှိမှာ ဂျူဗင်တပ်အသင်းကထွက်ခွာဖို့သေချာသလောက်ဖြစ်နေပြီးနည်းပြအသစ်ကလည်း ရိုနယ်ဒိုကိုထိုက်တန်တဲ့ငွေကြေးရရင်ရောင်းချသွားဖို့ရှိတယ်လို့တရားဝင်ပြောထားပါတယ်။
ဒိုလေးအနေနဲ့ ယူနိက်တက်နဲ့နာမည်ကြီးနေပေမယ့် လက်ရှိအထိ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြောဆိုထားတာကလွဲပြီး ယူနိက်တက်ဘက်က ဘာကမ်းလှမ်းမှုမှ မလုပ်ရသေးပါဘူး။
အသက်ကြီးပေမယ့် မပျက်စီးသေးဘူးဆိုတာပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့ဒိုလေးကို လက်ရှိမှာ သူ့အသင်းဟောင်းရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကလည်း ပေါင်၂၅သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒိုလေးကိုဘာကြောင့်မခေါ်သင့်သလဲဆိုတာကိုတော့ မန်ချက်စတာညနေခင်းကခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။
ဒိုလေးဟာအကောင်းဆုံးတောင်ပံတိုက်စစ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအမှန်ဖြစ်ပေမယ့် ယူနိက်တက်ကခေါ်ယူခဲ့ရင် ယူနိက်တက်ရဲ့တက်သစ်စ ကြယ်ပွင့်တွေထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အာမက်ဒိုင်ယာလိုနဲ့ဂရင်းဝုဒ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအစားရေရှည်အသင်းအတွက် အကျိူးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။
အသက်၂၈နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဟယ်ရီကိန်းကတော့ ယူနိက်တက်တို့အတွက်ဈေးများလွန်းနေပြီး လက်ရှိမှာ ချဲလ်ဆီးနဲ့မန်စီးတီးတို့ကလည်း ကိန်းနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အတွက် ယူနိက်တက်တို့အတွက်မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ ဂလေဇာရဲ့ငွေကြေးမူဝါဒကြောင့်လည်း ယူနိက်တက်တို့အတွက်နောက်ဆုံးမှာ ရနိုင်မယ်မထင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နွေရာသီအပြောင်းအရွေ့က ကိန်းဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ပဲ Daniel Levyကအဓိကကျနေလို့ ကိန်းအတွက်နဲ့အချိန်ကုန်ခံမနေသင့်ဘူးလို့ မန်ချက်စတာညနေခင်းကသုံးသပ်ပါတယ်။ ကိန်းအစား ယူနိက်တက်တို့အနေနဲ့ ၂၀၂၂ထဲမှာ ဟာလန်းကို ပစ်မှတ်ထားပြီးအခုတည်းက ခေါ်ယူနိင်ဖို့တိုက်တွန်းကြိုးစားထားသင့်ကြောင်းဆိုပါတယ်။
ရီးရဲနောက်ခံလူဗားရန်းကိုလည်း ချိတ်ဆက်နေပေမယ့် မခေါ်ယူသင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဗားရန်းဟာ ရီးရဲလ်မှာ ရာမို့စ်ရဲ့ တောက်ပမှုနဲ့နာမည်ကြီးနေတာဖြစ်ပြီး ယူနိက်တက်မှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်လောက်ဘူးလို့မန်ညနေခင်းကဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ရီးရဲလ်ဘက်က ပေါက်ဈေးကများလွန်းတယ်လို့ဝေဖန်ထားပြီး ဈေးညှိနှိုင်းလို့ရရင်ခေါ်ယူသင့်ပေမယ့် ဗားရန်းအစား ဗီလာရီးရဲလ်က ပေါ်တောရက်စ်ကိုပိုမိုခေါ်ယူသင့်ကြောင့်အကြံပေးထားပါတယ်။
ဒီတော့မန်ဖန်တွေရော မန်ချက်စတာညနေခင်းကသုံးသပ်ထားတာကိုလက်ခံပါသလား? ယူနိက်တက်ဖလားတွေသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူသင့်သလဲ?ကွန်မန့်မှာလွတ်လပ်စွာမျှဝေသွားနိုင်ပါတယ်။